विश्वका यी १५ देश जहा महिलाले स्तन देखाए दिइन्छ यस्तो कठोर सजाय
Posted on May 16, 2020 May 16, 2020 by Npnews
समाजमा बिना कपडा हिन्न पाउने मागका साथ विभिन्न राष्ट्रहरुमा महिलाकर्मीहरुले क्याम्पिन नै चलाउने गर्छन् । तर, विश्वमा केही यस्ता राष्ट्रहरु रहेका छन् जहाँ स्तन देखाएमा कडा सजायको भागिदार हुनुपर्छ । महिला पक्षमा कानुन नभएको भन्दै बेलाबेला यस्ता देशहरुमा आन्दोलन समेत हुने गरेको छ । आउनुहोस् हेरौ महिलाले सार्वजनिक स्थलमा स्तन देखाएमा कस्ताकस्ता सजाय दिइन्छ यी देशहरुमा
देख्दा अति सुन्दर तर संसारकै खतरनाक टापु,जसलाई मृत्युको कुवा समेत भनिन्छ ! तर आश्चर्यको कुरा त्यहि टापुमा हजारौ मानिस बस्दछन !
देख्दा अति सुन्दर तर संसारकै खतरनाक टापु,जसलाई मृत्युको कुवा समेत भनिन्छ ! मियाकेजिमा इजु नाम गरेको टापुलाई संसारकै खतरनाक ठाउँको रुपमा लिइन्छ। जापानमा रहेको यो टापुमा न्युक्लियर दुर्घटनाको साथै बारम्बार भूकम्प गइरहन्छ।
यो टापु देख्दा जति सुन्दर देखिन्छ त्यो भन्दा कयौं गुणा खतरनाक छ।दुनियाँको खतरनाक टापुहरुको सूचीमा सामेल यो टापुलाई मृत्युको कुवा समेत भनिन्छ।
त्यति मात्रै होइन मियाकेजिमा इजु टापुमा बारम्बार ज्वालामुखी विस्फोट भईरहन्छ, ज्वालामुखीको असरले मानिसहरुले स्वच्छ सास समेत लिन सक्दैनन्। यो टापुमा बाँच्नको लागी सधैँ अनिवार्य रुपमा ग्यास मास्क लगाउनपर्छ, किनकी यहाँको वातावरणमा बिषालु ग्यासको मात्रा निकै धेरै छ।यी कारणले यो टापुलाई संसारकै खतरनाक टापु मानिएको हो।
एक दाना कटहरको मूल्य १ लाख १४ हजार परेपछि किन्नेभन्दा पनि सेल्फी लिनेको भीड !
जकार्ता । नेपालमा सर्वसुलभ रुपमा पाइने कटहर इन्डोनेसियाको सुपरमार्केटमा महँगो साबित भएको छ । त्याहाँ राखिएको एक दाना कटहरको मूल्य १ लाख १४ हजार भनेर सुन्दा जो कोहि पनि चकित हुन्छ । तर वाताविकता त्यहि हो ।
इन्डोनेसियाको सुपरमार्केटमा कटहर जस्तै देखिने एक फलको मूल्य १ लाख १३ हजार ६०० रुपैयाँ राखिएको छ । यसै कारणले मानिस यो कटहर किन्नका लागि नभएर सेल्फी लिनका लागि टाढा टाढाबाट आउने गरेका छन् ।
इन्डोनेसियामा मानिसको औसत आम्दानी २१ हजार ८४३ रुपैयाँ रहेको छ । तर एक कटहरको मूल्यनै १ लाख १४ हजार राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि यो कटहर कस्ले किन्छ ? यो कटहरमा यस्तो विशेष के छ ? वास्तवमै यसको मूल्य यती बढि किन राखियो ?